Poopu Francis Ahọpụtala Bishọọpụ Ọhụrụ na Dayọsiisi Abakaliki - Igbo News | News in Igbo Language
Onyeisi ụka Katọliiki n'ụwa gbaa gburugburu, bụ Poopu Francis ahọpụtala Fada Peter Nworie Chukwu, bụ ụkọchukwu n'ụlọụka 'St. Patrick’s Catholic Church, Nduruku-Amagu' dịka bishọọpụ ọhụrụ nke dayọsiisi Abakaliki.
Onye na-anọchite anya Poopu Francis n'ala Nigeria, bụ Anthonio Filipazzi bụ ya kwupụtara nke a n'Abụja site n'ọnụ odeakwụkwọ isi ụlọọrụ ụka Katọliiki n'ala Nigeria, bụ Fada Zacharia Samjumi.
Fada Peter Nworie Chukwu ahụ a kpọlitere n'ọkwa ọhụrụ bụ onye nkuzi mahadum na mahadum steeti Ebonyi dị n'Abakaliki bụ isi obodo steeti ahụ, ma bụrụkwa onye a mụrụ n'abalị ise nke ọnwa Nọvemba ahọ 1965, n’Ededeagu Umuezekohohu dị na dayọsis Abakaliki.
Ọ gụrụ akwukwọ n'ụlọakwụkwọ 'Seat of Wisdom Seminary, Owerri' dị na steeti Imo na 'Bigard Memorial Major Seminary, Enugu' tupu e chie ya Fada na July 3, 1999. O mechakwara gaa ala bekee gụọ akwụkwọ na 'Franciscan University of Steubenville, Ohio US' na Milwaukee, dịkwa na mba US, ebe o tuuru ugo mmụta PhD n’ihe ọmụmụ 'Philosophy'.